Ungayigcina njani kwaye wabelane ngayo iMuvi yoMenzi bhanyabhanya
UMenzi weMuvi ukuvumela ukuba ugcine iifilimu zakho kwiifomathi ezahlukeneyo, uzithumele nge-imeyile, okanye wabelane ngazo kwiYouTube. (Uya kubona uninzi lwemiyalelo efanayo kwiKhaya thebhu kwiqela lokwabelana.)
Unako ukugcina umsebenzi wakho uqhubeka. Ukugcina iprojekthi osebenza kuyo kwihard drive yakho yexesha elizayo, cofa indawo yeFayile kwaye ukhethe Gcina iProjekthi. IWindows ivula Gcina njengebhokisi yencoko yababini, apho ungakhankanya indawo kunye negama lefayile.
Emva kokuba iprojekthi yakho igqityiwe, Nazi iindlela ezimbini onokuzisebenzisa ukuvelisa imuvi egqityiweyo.
Yenza ifayile yevidiyo yedijithali
Ukuba ufuna ukubukela ifilimu yakho kwi-PC yakho okanye esweni esinye isixhobo, olu khetho lulungele. Ungalibali ukuba kunokuthatha amakhulu amawaka eemegabhayithi okanye ngaphezulu kwesithuba ukugcina imovie enye. Landela la manyathelo:
Cofa kwiThebhu yefayile kwaye ucofe Gcina iMovie.
Khetha umgangatho okanye indawo oya kuyo kwimenyu esezantsi evelayo.
Unokukhetha phakathi kwezigqibo ezahlukeneyo, kubandakanya inkcazo ephezulu, isikrini esibanzi, okanye iTV esemgangathweni. Qaphela ukuba ungazilungiselela kwakhona imovie ukuze isetyenziswe nefowuni ephathekayo okanye njengencamathiselo ye-imeyile.
Khetha indawo kwaye uchwetheze igama; emva koko ucofe ku Gcina.
Yabelana ngobugcisa bakho kwiYouTube
Thetha ngokulula! UMenzi weMovie uyifomatha ngokuzenzekelayo imovie yakho ukuze ubonwe kakuhle kwiYouTube kwaye uyithumele khona. Ukuba unayo iakhawunti esele ikho kuYouTube, landela nje la manyathelo:
Cofa kwithebhu yasekhaya kwaye ucofe iqhosha leYouTube kwiqela lokwabelana.
Khetha isisombululo sebhanyabhanya yakho.
UMenzi weMuvi ubonakalisa ibhokisi yencoko yababini apho ungangena khona igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha le-YouTube (Kuya kufuneka uphinde ungene kwiakhawunti yakho yeMicrosoft ukuba awukabinayo.)
Emva kokuba uMenzi weMovie ekungenile, unikwa ithuba lokufaka igama kunye nenkcazo, emva koko ifilimu ilayishwe wena. Sakubonana kwii-Oscars!
3605 v ipesika yepilisi
yintoni iqabane lakho
Uyenza njani iincakuba ezinamaso
I-monistat 1 ayisebenzi